यसरी पक्राउ गरे प्रहरीले विप्लवका १८ कार्यकर्ता !::Nepal's Online News Portal
यसरी पक्राउ गरे प्रहरीले विप्लवका १८ कार्यकर्ता !
आइत, जेष्ठ २६, २०७६
कास्की प्रहरीले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका १८ नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार शनिबार राति उनीहरुलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ उरी भन्ने ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो ।पक्राउ पर्नेहरुमा विप्लव समूहका कास्की सेक्रेटरी आक्रोश भनिने विवेक भण्डारी, विद्यार्थी सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष काजी गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य मिलन राईलगायत पार्टीका जिल्लास्तरीय नेता तथा विद्यार्थी सङ्गठनका नेता/कार्यकर्ता रहेको प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए ।
विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता आमा समूहको भवनमा पार्टीको बैठकमा बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले घेरा हालेर उनीहरुलाई गिरफ्तार गरेको बताइएको छ ।
उनीहरुलाई शनिबार राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ल्याई पुर्‍याएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
इटहरीमा मेयर द्वारीकलाल चौधरीको फेरी कडा प्रहार ! भ्रष्टचारीको एक एक नाम भन्दा सबै चकित(भिडियो)
झापा । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारीकलाल चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दुई जना कर्मचारीलाई ढोका थुनेर कुटपीट गरेका छन् । उनले कार्यालयमै बोलाएर दुई कर्मचारीलाई कुटपीट गरेका हुन् । कुटपीट गरेपछि भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई काम...
आउदो फागुन वा चैतमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा नेता पौडेलको जोड
चितवन। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आउदो फागुन वा चैतमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले महाधिवेशन नियमित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । पार्टीको चार वर्षको कार्यकाल...
जनतालाई फेरी सास्ती ! प्रधानमन्त्री ओली फर्केपछि बढाइँदै गाडी भाडा
जेठ ३२, काठमाण्डौ । सरकारले सबैखाले सार्वजनीक सवारी साधनमा लागू हुने गरी बढाएको एक दिन पनि नबित्दै फिर्ता लियो । बिहिबार दिउँसो करिब ३ बजेतिर भाडा बढाएको सूचना जारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले बेलुकी...
गुठी विधेयक वार की पार ! गुठी विधेयक विरोधमा बसन्तपुरमा बृहत् प्रदर्शन
काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विधेयकको विरोधमा बसन्तपुरमा पनि बिहानै प्रदर्शन भएको छ। ज्यापु महागुथी नेपाः ले आह्वान गरेको बसन्तपुरको दमकल अगाडिबाट विरेध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनकारीले उक्त गुठी विधेयक धर्म संस्कृति...
सुकेधारा बम विष्फोटः मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो ,विप्लव कार्यकर्ता रामकुमार श्रेष्ठको शनिबार मृत्यु
काठमाडौं। नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको बम विष्फोटमा परी थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै जेठ १२ गते काठमाडौँमा भएको श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ पुगेको छ ।...
सकियो खरेलको चुरीफुरी ! ओली फर्किएपछि खरेलको जागिर चट्-यस्तो रहेछ खास कारण
किन ? पत्याउदैनन तत्कालिन सरकारलाई ! ओली सरकारले ल्याएका विधेयक विवादै विवादमा
जेठ २९, काठमाण्डौ । नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरु विवादमा परेका छन् । अधिकांश विधेयकका कारण संसददेखि सडकसम्म विरोध भएको छ । विवादको श्रृखला अझै जारी छ । यसले सरकारलाई नै कमजोर...
नाकको हड्डी भाँच्ने मेयरको धम्की ! यसरि फिर्ता लिए विवादास्पद अभिव्यक्ति
२६ काठमाडौं । चर्को आलोचनापछि इटहरी नगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले ‘पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न एक करोड छुट्याएको छु’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका छन् । मेयर चौधरीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आवेगजन्य परिस्थितिका कारण आफूले...
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण ! जनतालाई सास्ती
२५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार झण्डै दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा निस्किए । तर, प्रधानमन्त्रीको सवार विमान उड्ने समयमा घि आधा घण्टाभन्दा बढी त्रिभुवन विमानस्थलको उडान(अवतरण रोकियो । उडान मात्र रोकिएनन्,...